editor — Sat, 10/28/2017 - 17:03
तिमीले जुन पोल्टामा हाल्यौ
घामलाई बोरामा कोच्यौ
हिमालमा सिगौरी खेल्यौ
तराईलाई बुटले कुल्च्यौ
नदीको मुहान टाल्यौ
माया मनबाटै फाल्यौ
ए ट्याक्सी दाइ
narayan pokharel — Sat, 10/28/2017 - 01:39
जाउँजाँउ हरर मीटर कुँदाउदै
सत्य बोली मिठो लय गीत सुनाउदै
पहिले थिएन मोल तोल मीटर बढाउने
गाह्रो सारो मान्छेलाई बन्धक बनाउने
पढे लेख्या कमै थिए सबै रमाउने
जगलाई दिन्थ्यौ सन्देश राम्रो देश बनाउने
शरद् लाग्यो स्वदेशमा
editor — Fri, 10/27/2017 - 00:13
शरद् लाग्यो, स्वदेशमा धान झुले होलान्
जताततै रङ्गीचङ्गी फूल फुले होलान्
झलमल्ल भयो होला पखेरीमा घाम
घामसँगै गगनचुम्बी हिमाल खुले होलान्
स्वर्गको यात्रा - सर्ग ०२ (दुई)
editor — Fri, 10/27/2017 - 00:09
स्वर्गको यात्रा (महाकाव्य)
उपकारी गुणीव्यक्ति धर्मका हुन् सार
भगवानले लिने गर्छन् विविध अवतार
उनकै संतुलनले चलेको छ यो संसार
यस्ता दीनदयालको गरौं जय जयकार
सबका अधिपतिलाई कल्पवृक्ष ठानौ
धर्मलाई यही वृक्षको मूल जरो मानौ
वेद काण्ड, पुराण शाखा, यज्ञ हुन पुष्प
यही पुष्पबाट प्राप्तफल मोक्ष भनी जानौ
बहुआयामिक देवकोटा, युग र स्वच्छन्दतावाद
editor — Thu, 10/26/2017 - 23:59
एउटा पाटो अभावमा रम्ने जिन्दगीको, अर्कोतिर शैक्षिक समुन्नतिभित्र दूरदृष्टि सजाइएका कुरा त्यसमा पनि साहित्यभित्र प्रकृतिका कुना कन्दरा चियाइएको; खुला बहुआयामको फाँटमा अङ्कित लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नाम आजका सुकोमल बालहृदयदेखि बयोबृद्धका मनमस्तिष्कमा लिपिबद्ध प्रायः नभएको लाग्दैन । कलम कल्पनाको सागरभित्र वायुको गतिमा दौडिएका विलक्षण भाव लहरी जीवन्त छ, महाकविको आशुकवित्व प्रभावभित्र ।
हेर न साथी
editor — Thu, 10/26/2017 - 23:51
हेर न साथी त्यो पारी डाँडा हिमाल हाँसेको
घामको झूल्को पाखामा पर्दा मयूर नाचेको
हरियो वन बाघ र मृग बसने रमाई
खुशीले बस्छन् कालिज डाँफे हाँगोमा समाई
पधेंरो रै छ गैरीको दह यी प्राणीले पिउँदछन्
नेपाली माटो नभूली यहाँ गौरवले जिउँदछन्
भित्ते पात्रो र तस्वीर
सुवास “दीप” — Tue, 10/24/2017 - 20:06
समीर लघुकथा अभियान
भित्तामासँगै झुण्डिइरहेको भित्तेपात्रो तस्वीरलाई भन्दै थियो – “तिम्रो जस्तो जिन्दगी नि के जिन्दगी। न कहिल्यै रूप फेर्नु छ न कहिल्यै फर्कनु छ। हामीलाई हेर हामी प्रत्येक महिना नयाँ-नयाँ रङ्ग रूपमा सजिएर बस्छौँ।”
editor — Tue, 10/24/2017 - 03:01
नागढुङ्गामा उभिएर (कविता-संग्रह)
छक्कड काटेका पूर उमेर नभएका अधबैँसे एक हल गोरु
साथमा दरो फलामे कल्टी हलो ल्याएर
भग्नावशेष भएको त्रिभूवन सदन वरिपरि
मज्जाले लुँडी झिकीझिकी हलो जोतेर
तोरी छर्न मन लागेको छ,
dotpen — Sat, 10/21/2017 - 23:24
तस्वीर पठाउनु (गजल)
Samarpit prakash tkp — Sat, 10/21/2017 - 09:14
के छ र गुमाउनु, के छ र पाउनु
बिर्सेर सबथोक एकछिन रमाउनु
दुखभित्र पनि खुशीहरू खोज्नु छ
पीडाहरुमा तिमी उत्सव मनाउनु
छ हाइकु (कुमारी कन्या)
bluesky — Fri, 10/20/2017 - 22:20
Narkumar — Fri, 10/20/2017 - 19:57
नर कुमार चौहान
मेरा मनका भावनाहरू पवित्र छन्,
कहिले पनि नफटाउनु है प्रिय
तिमी नै त हौ नि मेरो एउटै मात्र सपना,
मलाई अन्यत्र कतै नखटाउनु है प्रिय
तिम्रो दिलबाट कहिल्यै नहटाउनु है प्रिय
सुवोनकी आइमाई साथी
nikunja — Fri, 10/20/2017 - 13:55
नाकको फोराबाट फ्याकेको सिगरेटको धुँवालाई दुई ओठको हावाले वायुमण्डलतिर धकेल्दै भनी - "क्रेजी आप्रवाशी ! तँसँग म बिहे गर्न सक्दिन । जति गर्नु छ यहीँ गर । रहर पुरा गर । र, जा ।"
अपोजिट पर्दाबाट आइरहेको युवतीको आवाजतर्फ हाम्रो ध्यान गयो ।
"तँलाई मैले कतिपटक सम्झाएकी छु ह ? धेरै पिएर यहाँ नआ है भनेर ।" ऊ फतफताउँदै बाहिर निस्की । टिटेवलबलको घर्रा र्घरररर्र तानी । चुरोट निकाली र बलिरहेको ग्याँस हिटरमा झोसि । दुई ओठले बेस्सरी च्याप्दै लामो सर्को तानी ।
editor — Fri, 10/20/2017 - 13:40
‘माल’ शब्द आफैमा अपूर्ण हुदाहुदै पनि अनेकार्थक साथै बहुआयामिक प्रतिभा बोकेको अर्थबाहक शब्द रहेछ । विभिन्न उमेर समूहले प्रयोग गरिरहने यो शब्दलाई सबैले आ आफ्नु ढंगले अर्थ्याएका पाइयो । जाति, पेशा, लिंग, उमेर, समय र परिस्थिति अनुसार यसको निस्फिक्री रुपमा बढ्दो प्रयोगले नै यसको छुट्टै विशेषता र महत्व थाहा हुन्छ । यो शब्द त स्वतन्त्र र सर्वब्यापी पो रहेछ । यसका पर्यायवाची शब्दहरुको खोजी गर्दा ठुलै महाकाव्य नै स्रिजना हुन् बेर नलाग्ला ।
जब हरेक बर्ष तिहार आउँछ
soisal — Fri, 10/20/2017 - 06:59
सिजन लामा “सोईसाल”
जब हरेक वर्ष तिहार आउँछ
मेरो त रित्तो निधार आउँछ
सबैका चेली केके ल्याउछन्
आफ्नो त रोटी न अचार आउँछ
यी हल्लाहरु हुन् तिमीले सुनेका
नेता बनेका किन बाइफाले
दशैं र तिहार
भुलेको ती रातहरू
टाढा टाढा जानु छ साथी
बासना,हारेको प्रेम र सन्तान
पिउनै पर्‍यो गल्ली चोकमा
मातृभाषामा शिक्षा सरकारी प्रतिबद्धता र नागरिक जिम्मेवारी
स्वास्नी हुन नसकेकी प्रेमिका
तरबार बलियो हुदैन नि
टोकियोमा लक्ष्मी जयन्ती - रचना आवहानबारे सूचना
लाग्छ आफू आफैँसँग हारेँ
चानो आफ्नो बन्छ
'ल्होछार,' 'ल्होसार' तथा 'लोसार' होइन 'लोशर'
आसक्त प्रेम !
जिन्दगी नै सुम्पिदिउँ कि